Arsenal ayaa Liverpool u diiday in ay jebiso rikoorka 100ka dhibic ee horey u dhigtay Man City… – Hagaag.com
Posted on 16 Luulyo 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Arsenal ayaa sii wada rajada ay uga qeyb noqon karto mid ka mid ah horyaallada Yurub ee xilli ciyaareedka soo socda, ka dib guushii ay 2-1 ku dharbaaxeen Liverpool Arbacadii, wareegii 36aad ee Horyaalka Ingiriiska.
Dhibcaha Arsenal ayaa kor ku kacay kadib markii ay u soo noqotay qaab ciyaareedka guusha ee ka maqneyd labadii wareeg ee hore, iyadoo barbaro la noqotay kooxda Leicester City isla markaasina guuldaro kala kulantay kooxda Tottenham Hotspur, waxay leedahay 53 dhibcood, waxyna ku jirtaa kaalinta sagaalaad ee kala horeynta, waxay seddax dhibcood ka hooseysaa kooxda Wolverhampton, oo haatan ku jirta kaalinta lixaad, oo la filayo inay ku soo baxdo Europa League. Inkastoo weli ay harsan tahay labo ciyaar.
Dhanka kale, Liverpool ayaa dhibcaheeda ku joogsaday 93 dhibic iyadoo kooxda ugu soo dhow ee Manchester City ay ku hogaamineyso 18 dhibcood .
Natiijadaas ayaa Liverpool ka horjoogsatay inay noqoto kooxdii ugu horreysay ee ka gudubta caqabadda 100-dhibic hal xilli ciyaareed taariikhda tartankan qiimaha leh, si ay u jebiso rikoorkii ay dhigtay kooxda Man City, taasoo ku dhammaysatay tartankii xilli ciyaareedkii 2017-2018 iyagoo leh 100 dhibcood.
Liverpool ayaa labada kulan ee u haray la ciyaari doontaa kooxaha Chelsea iyo Newcastle, haddii labadan kulan ay badiso xataa waxay gaareysaa 99 dhibcood.